Football Khabar » भारतीय लिगमा सावित्राको सनसनी : हानिन् तेस्रो ह्याट्रिक, टिम फाइनलमा !
भारतीय लिगमा सावित्राको सनसनी : हानिन् तेस्रो ह्याट्रिक, टिम फाइनलमा !
भारतीय उमन्स लिग खेलिरहेकी नेपालको राष्ट्रिय टिमकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले जारी लिगमा तेस्रो ह्याट्रिक गरेकी छन् । सेथु क्लबबाट पहिलो सिजन खेलिरहेकी सावित्राले आज सेमिफाइनलअन्तर्गत भएको एसएसबी सेन्ट्रलविरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक गरेकी हुन् ।
आजको खेलमा पनि सावित्राले ह्याट्रिकसहित एक्लैले ४ गोल गरिन् । उनकै ४ गोलको मद्दतमा सेथु एफसीले सेन्ट्रल महिला फुटबल क्लबलाई ८–१ फराकिलो अन्तरले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनायो ।
निकै आक्रामक देखिएकी सावित्राले खेलको ४१औं मिनेटमा पहिलो गोल गरिन् । त्यसपछि उनले ५९ औं र ६५औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक गरिन् भने ९०औं गोल अर्को गोल थप्दै कूल ४ गोल गरिन् ।
यता, सावित्राले आफ्नो डेब्यु खेलमा पनि ४ गोल नै गरेकी थिइन् । मनिपुर पुलिस स्पोर्टस् क्लबविरुद्धको सो खेलमा उनले ४ गोल गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले एफसी कोहलपुर सिटीविरुद्धको खेलमा पनि ह्याट्रिक गरिन् ।
हालसम्म उनले प्रतियोगितामा कूल तीन ह्याट्रिक गरेकी छन् । यससँगै लिगमा सावित्राको कूल गोल संख्या १३ पुगेको छ । लिगमा सावित्रासँगै नेपाली खेलाडी अनिता बस्नेत पनि खेलिरहेकी छन् ।
प्रतियोगिताको फाइनल खेल बुधबार हुनेछ । उपाधिका लागि सावित्राको टिम सेथुले मणिपुर पुलिसको सामना गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १३:३४